"ကျေးဇူးပြု၍ အမျှဝေပါ" ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 8:16 PM | No မှတ်ချက် | တစ်ခါတုန်းက ဘုရားအလောင်းဟာ သူဌေးမျိုးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားအလောင်းမှာ ကောက်ကျစ်တဲ့ ညီတစ်ယောက်လည်း ရှိပါတယ်။
တစ်နေ့မှာ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် ကုန်ရောင်း ကုန်ဝယ် လုပ်ဖို့ ရေလမ်းခရီးနဲ့ ခရီးထွက်ပြီးအပြန်မှာ ငွေတစ်ထောင် အမြတ်ရခဲ့တယ်။
မြစ်ဆိပ်တစ်ခုရောက်တော့ လှေကို ခဏဆိုက်ပြီး ထမင်းအတူတူ စားကြတယ်။ ဘုရားအလောင်းက ထမင်းစားကြွင်းတွေကို ငါးလိပ်တွေကို ကျွေုးပြီး " ဤငါးလိပ်တွေကို အစာကျွေးရသော ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို မြစ်စောင့်နတ်အား အမျှပေးဝေပါ၏ အမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူပါ" လို့ မြစ်စောင့်နတ်ကို အမျှပေးဝေလိုက်တယ်။
မြစ်စောင့်နတ်လည်း သာဓုခေါ်လိုက်တဲ့ ကုသိုလ်ကြောင့် ချက်ချင်း စည်းစိမ်တွေ တစ်ဆင့် တိုးသွားပါတယ်။
ကောက်ကျစ်တဲ့ညီဟာ အသပြာထုပ်နဲ့ပုံစံတူ ကျောက်ခဲထုပ်တစ်ထုပ်ကို ထုပ်ထားတယ်။ ခရီးဆက်ကြရင်း ညီက လှေအစောင်းမှာ အသပြာထုပ် ရေထဲကျတဲ့ပုံစံနဲ့ ကျောက်ခဲထုပ်ကို ရေထဲ ပစ်ချလိုက်တယ်။
တကယ်တမ်းချမိတာက ကျောက်ခဲထုပ် မဟုတ်ဘဲ အသပြာထုပ် ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ငါးကြီးတစ်ကောင်က အသပြာထုပ်ကို မြိုလိုက်ပါတယ်။
တံငါသည်တွေ ကွန်ပစ်တော့ အသပြာထုပ်ကို မြိုထားတဲ့ ငါးကြီးကို မိပါတယ်။ မြစ်စောင့်နတ်က " အစ်ကိုလုပ်သူ အမျှဝေလို့ ငါ့မှာ စည်းစိမ် တိုးရတယ် ငါပြန်စောင့်ရှောက်မှပဲ " ဆိုပြီး ငါးရောင်းတဲ့ တံငါသည်တွေကို ဘုရားလောင်း အိမ်ရှေ့အရောက် နတ်တန်ခိုးနဲ့ ပို့ပေးတယ်။
ဘုရားအလောင်းက ငါးကိုဝယ်ပြီး မယားကို ပေးတယ်။ ငါးဗိုက်ကို ခွဲလိုက်တဲ့အခါ အသပြာထုပ်ကို တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။
မြစ်စောင့်နတ်ကလည်း ကိုယ်ထင်ရှားပြပြီး " သင်အမျှဝေလို့ ငါပြန်စောင့်ရှောက်တာပါ" ဆိုပြီး လာပြောပါတယ်။
ဒီဝတ္ထုလေးမှာ ဘုရားအလောင်းဟာ စားကြွင်းတွေကို ဒီအတိုင်း မစွန့်ပစ်ဘဲ ငါးလိပ်တွေကို ကျွေးပြီး မြစ်စောင့်နတ်ကို အမျှဝေလိုက်တာလေးက တကယ့်ကို အတုယူစရာပါ။ ကုသိုလ်၂ခုကို အေးအေးဆေးဆေး ယူသွားတာပါ။
ဘုရားအလောင်းရဲ့ အမျှဝေပုံလေးကို အတု ယူပြီး နတ်တွေကို အမျှဝေတဲ့အကျင့်ကို ထုံထားရမှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ အမျှဝေမှုကြောင့် နတ်တွေမှာ စည်းစိမ်တိုးတိုးနေမှာပါ။ စည်းစိမ်တွေ တိုးတိုးနေတဲ့ နတ်တွေကလည်း သူတို့စည်းစိမ် တိုးနေတာကို သေချာ မှတ်ထားမှာပါ။ အခွင့်သင့်တဲ့ အခါတွေမှာ မထင်မှတ်တဲ့ အနေနဲ့ ကူညီသွားမှာပါ။
-မထင်မှတ်တဲ့ ဘေးရန်တွေကို တားဆီးပေး လိုက်တာတွေ။
-ဂုဏ်သိက္ခာ မထိခိုက်အောင် ကူညီလိုက်တာတွေ . . စသည်ဖြင့် အများကြီး ရှိမှာပါ။ ကိုယ်က မသိနိုင်လို့ပါ။
ကုသိုလ်ပြုနည်းက . . .
ကုသိုလ်ပြုပြီးလို့ အမျှဝေတဲ့အခါ မတ်တပ်ရပ် ။ လက်အုပ်ကလေးချီပြီး " ဤ ငါးလိပ်တွေ ကျွေးရသော ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို ကိုယ်စောင့်နတ် , တောစောင့်နတ် , တောင်စောင့်နတ် , မြို့စောင့်နတ် , သစ်ပင်စောင့်နတ် . . တို့အား အမျှပေးဝေပါ၏ အမျှ အမျှ ယူတော်မူပါ" လို့ သေချာ ပေးဝေရမှာပါ။
လက်အုပ်ချီတာက နတ်တွေကို ချီတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ပြုတဲ့ ကုသိုလ်လေးကို ချီတာပါ။ အမျှဝေတာကတော့ ကိုယ်ရောက်တဲ့ နေရာဒေသကို ကြည့်ပြီး အဆင်ပြေသလို ဝေရမှာပါပဲ။
ကုသိုလ်တွေ ပြုပြီး နတ်တွေကို အမျှပေးဝေရင် နတ်တွေက လူတွေကို ပြန်စောင့်ရှောက်တယ် ဆိုတာ မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်မှာ မြတ်စွာဘုရားက သေချာ ဟောပြထားတယ်။
ကိုယ်ကသူတို့ကို မမြင်ရ , မကြားရပေမယ့် နတ်တွေကတော့ ကိုယ်ပြုနေတာတွေ , ကိုယ်ပြောနေတာတွေကို မြင်နေ ကြားနေရတာပါ။
" ကုသိုလ်မပြတ် ဖြစ်ပါစေ " ဆိုတဲ့ မဟာစည် ဆရာတော် ဘုရားကြီးရဲ့ သြဝါဒအတိုင်း . . .
ကုသိုလ်တွေ မပြတ်ဖြစ်နေရင် အကုသိုလ် ဖြစ်ခွင့်လည်း နည်းနေတော့တာပါ။ ကုသိုလ်ပြတ်ချိန်ကို အကုသိုလ်က ချောင်ထဲက ချောင်းနေတာပါ။ ဘာပဲ ပြောပြော ကုသိုလ်တွေ မပြတ်စေဘဲ ပြုတဲ့ ကုသိုလ်တိုင်းကို နတ်တွေကို အမျှပေးဝေလိုက်ဖို့ပါပဲလေ။
" ရဝေနွယ်- အင်းမ " (ကျေးဇူးပြု၍ အမျှဝေပါ )
Donated by ဓမ္မနှစ်သက်သူ ( ၁၁.၉.၂၀၁၆ )